सम्पूर्ण पाठ कागजात घुसाउँदा
कुल पाठ कागजात घुसाउँदा
पाठ फ्रेमहरू घुसाउँदा
तपाईँले फाइल घुसाउन चाहनुभएको कागजातको स्थानमा कर्सर राख्नुहोस् ।
तपाईँले घुसाउन चाहनु भएको पाठ कागजातलाई अवस्थित गराउनुहोस्, र ठीक छक्लिक गर्नुहोस् .
पाठ कागजातहरूको सामाग्रीहरू हालको कागजातमा स्थापित हुन्छ र अद्यावधिक हुँदैन यदि स्रोत फाइल पिवर्तन भयो भने. यदि तपाईँ सामाग्रीहरू तपाईँले स्रोत कागजात परिवर्तन गरेको बला स्वत: अद्यावधिक होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, फाइल लिङ्कको रूपमा घुसाउनुहोस्.
लिङ्कको रूपमा कुल पाठ कागजात घुसाउँदा
नयाँ सेक्सन बाकसमा नाम टाइप गर्नुहोस् , र लिङ्कजाँच बाकस चयन गर्नुहोस् .
फाइल नामबाकसमा, फाइलको नाम टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईँ घुसाउन चाहनुहुन्छ, वा ब्राउज बटन क्लिक गर्नुहोस् र फाइल अवस्थित गर्नुहोस्।
यदि लक्ष पाठ कागजातले सेक्सनहरू समावेश गर्छ भने, तपाईँ सेक्सन बाकसहरूमा तपाईँले घुसाउन चाहनुभएको सेक्सन चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, सेक्सनका लागि ढाँचा विकल्प सेट गर्नुहोस्.
LibreOffice ले घुसाइएको सेक्सनको सामाग्रीहरू स्वत: अद्यावधिक गर्दछ जहिले स्रोत कागजात परिवर्तन हुन्छ. सेक्सनको म्यानुअल सामाग्रीहरू अद्यावधिक गर्नका लागि, उपकरणहरू - अद्यावधिक - सबै अद्यावधिक गर्नुहोस्रोज्नुहोस्.
Title is: सम्पूर्ण पाठ कागजात घुसाउँदा